Naadiyada Yurub oo laga yaabo inay u diidaan ciyaartoyda ka qayb galaya Koobka Qaramada Afrika | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Naadiyada Yurub oo laga yaabo inay u diidaan ciyaartoyda ka qayb galaya...
Naadiyada Yurub oo laga yaabo inay u diidaan ciyaartoyda ka qayb galaya Koobka Qaramada Afrika
Kooxaha ugu waa wayn Yurub ayaa ku hanjabaya in ayna fasaxin ciyaartoyga ka qayb galaya koobka qaramada Afrika ee AFCON ee dhawaan ka furmaya dalka Cameroon sababo la xidhiidha cabsi ay ka qabaan hab-maamuuska caafimaadka ee Covid-19.
Ururka naadiyada Yurub, oo matala kooxaha hormuudka ka ah qaarada Afrika, ayaa walaacooda FIFA ku ogeysiiyay warqad ay aragtay AFP.
“Marka la eego hab-maamuuska khuseeya, sida aan ka warqabno, CAF (Xiriirka kubadda cagta Afrika) weli ma aysan soo bandhigin hab-maamuus caafimaad iyo hab-raac ku habboon tartanka AFCON, haddii uu maqan yahayna aysan naadigu awoodi karin inay soo saaraan. Ciyaartoyga tartanka , ” ECA ayaa u sheegtay maamulka kubbadda cagta adduunka.
Koobka Qaramada oo horey dib loogu dhigay sanadkii hore xaalad caafimaad darro awgeed ayaa lagu wadaa inuu ka furmo Cameroon 9-ka Janaayo , wuxuuna socon doonaa ilaa 6-da Febraayo.
Qaar badan oo ka mid ah ciyaartoyda Afrika ee hogaaminaya waxay ku sugan yihiin kooxo ka dhisan Yurub , oo ay ku jiraan labada ciyaaryahan ee Liverpool Mohamed Salah iyo Sadio Mane, Riyad Mahrez oo Manchester City ah, Achraf Hakimi iyo Idrissa Gana Gueye oo ka tirsan Paris Saint-Germain.
Maxaa looga hadlay kulankii Golaha Wadatashiga Qaran iyo Midowga Musharraxiinta?
Son Heung-min oo ku guulaystay abaal Qaali ah oo Asia laga...
Ziyech oo qarka u saaran inuu ka tago Chelsea Chelsea...
Ujeedada ka dambeysa In La gumaado Shacabka Muqdisho 12/01/2022